Inona no atao hoe HTTPS? | Martech Zone fanafohezan-teny
Martech Zone » fanafohezan-teny » Fanafohezana manomboka amin'ny H	» HTTPS
HTTPS no fanafohezana ny hoe Protocol Transfer Hypertext (azo antoka).
Fanitarana ny Hypertext Transfer Protocol. Izy io dia ampiasaina amin'ny fifandraisana azo antoka amin'ny tamba-jotra solosaina ary ampiasaina betsaka amin'ny Internet. Ao amin'ny HTTPS, ny protocole fifandraisana dia miafina amin'ny fampiasana Transport Layer Security na, taloha, Secure Sockets Layer.